လူဝင်စားတစ်ဦး၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း (ဇာတ်သိမ်း) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » လူဝင်စားတစ်ဦး၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း (ဇာတ်သိမ်း)	20
လူဝင်စားတစ်ဦး၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း (ဇာတ်သိမ်း)
Posted by may flowers on Jun 28, 2012 in Creative Writing, Short Story | 20 comments
ကိုဖိုးအေးအိမ်ထောင်ကျပြီး ဆယ်နှစ်လောက်အကြာ သားနှစ်ယောက်မွေးပြီးချိန်အထိ
ကိုဖိုးအေးရဲ့ဘ၀မှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ပန်းခင်းသောလမ်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့
ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖိုးအေးမိန်းမ မမီမီဟာ ကျောင်းဆရာမလေးအလုပ်အပြင် အပြင်ဝင်ငွေ
ရရန်ဆိုသောအကြောင်းပြချက်နဲ့ နီးစပ်ရာကျေးရွာလေးတွေမှာ အ၀တ်အထည်လေး
တွေကို လပေးစနစ်နဲ့ လိုက်လံရောင်းချပါတယ်။ မြို့ကအ၀တ်အထည်လေးတွေ၊ ထီးဖိ
နပ်လေးတွေကို အနီးအနားကတောရွာလေးတွေမှာ ကျောင်းအားရက်စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂ
နွေနေ့တွေမှာ စက်ဘီးလေးတစ်စီးနဲ့လိုက်လံရောင်းချပြီး လကုန်ပြီးလို့လဆန်းရက်တွေ
မှာတော့ ကျောင်းအဆင်းအိမ်ကိုတန်းမပြန်ပဲ ရစရာရှိတဲ့အထည်ကြွေးတွေကို ရွာစဉ်
လှည့်ပြီးလိုက်လံကောက်ခံရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လဆန်းတစ်ရက်နေ့ကစလို့
ဆယ်ရက်နေ့လောက်အထိ မမီမီအိမ်ပြန်မိုးချုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီရက်တွေဆို ကိုဖိုး
ပြီးချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ် ထားရပါတယ်။
သူ့မိန်းမ မမီမီစပြီးခြေလှမ်းပျက်နေပေမဲ့ လူအများကတိုးတိုးတစ်ဖုန် ကျယ်ကျယ်တစ်
ပြောဆိုနေသံတွေကိုကြားနေရပေမဲ့ လူရိုးကြီးကိုဖိုးအေး အစကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။
နောက် လူပြောသူပြောအရမ်းများလာရုံမျှမက သူ့မိန်းမနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကလည်း ကို
ဖိုးအေးတို့ရွာနဲ့ရွာခြင်းနီးကပ်နေတော့ကာ ကိုဖိုးအေးအမတွေ ညီမတွေကပါ ၀ိုင်းပြော
လာတော့ ကိုဖိုးအေးနဲနဲသံသယ၀င်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့ကိုဖိုးအေး အကြွေး
တောင်းမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့မိန်းမနောက်ကို ကြိုရန်လိုက်သွားပါတယ်။ ဒီလို
လူတစ်ယောက်က သူ့မိန်းမပခုံးလေးကိုဖက်ကာ ယှဉ်တွဲပြန်လာကြတဲ့သူနှစ်ယောက်
ကို ကိုဖိုးအေးပက်ပင်းတွေ့ပါတော့တယ်။ အရမ်းဒေါသထွက်သွားတဲ့ လူရိုးကြီးကိုဖိုး
သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ ဒေါသမပြေသေးပဲဆက်
ပြီး ရန်ပွဲဆင်နွဲကြပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ ကိုဖိုးအေးမိန်းမက ကိုဖိုး
အေးနဲ့မပေါင်းပဲ ကွာရှင်းပေးရန်တောင်းဆိုပါတယ်။ ကိုဖိုးအေးကလည်းလုံးဝမကွာနိုင်
ကြောင်းနဲ့ကလေးတွေကိုငဲ့ရန်တောင်းပန်ပြောဆိုရှာပါတယ် ။ အရင်ကအပြစ်တွေကို
ကြောင်း ပြောခဲ့ပေမဲ့ မမီမီကတော့လုံးဝစိတ်ပြန်မလည်လာတော့ပဲ လင်မယားနှစ်
အခန်းခွဲအိပ်ပြီး ကွာရှင်းပေးရန်ပဲအတွင်တွင်တောင်းဆိုကာ ဖောက်ပြန်မြဲဖောက်ပြန်
နေပါတော့တယ်။ ကိုဖိုးအေးရဲ့ဝဋ်ကစပြီးလည်လာပြီလို့ဆိုရပါတော့မယ်။ မယားကို
လည်းမပြတ်နိုင်ပဲ ဖေါက်ပြန်နေတာသိနေပေမဲ့ သူ့မိန်းမအိမ်ပေါ်ကချက်ခြင်းဆင်းသွား
မလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဘာမှမပြောနိုင်ရှာပဲတစ်ယောက်ထဲကျိတ်ကာ ဒေါသဖြစ်
ခံပြင်းတဲ့စိတ်တွေကို မသောက်ဖူးတဲ့အရက်တွေကိုသောက်ပြီး မေ့ပျောက်အောင်ကြိုး
ဒါပေမဲ့ဝဋ်ကြွေးက ဒီလောက်နဲ့ရပ်မနေပါဘူး။ တစ်နေ့ကိုဖိုးအေးတစ်ယောက် အရက်မူး
အရမ်းမူးပြီး အရက်ဆိုင်မှပြန်လာပါတယ်။ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ရင်တွေပူပြီးရေအရမ်းငတ်
သူ့ရုံးကစာရေးမတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကို ရေ၀င်တောင်းသောက်ပြီးအမူးလွန်ကာ အိမ်အ
ပြင်ဘက်အခန်းမှာ အိပ်ပျော်သွားပါတယ်တဲ့။ မိုးကလည်းတော်တော်စုန်းစုန်းချုပ်နေ
တာမို့ အဆိုပါစာရေးမလေးဟာ ကိုဖိုးအေးကိုအတန်တန်နိုးပါသော်လည်းမထနိုင်တာ
ကြောင့် ဒီအတိုင်းပဲအပြင်မှာ အိပ်လိုကအိပ်ပါစေလေဆိုပြီးစောင်လေးခြုံပေးပြီးအပြင်
မှာ သိပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီစာရေးမလေးယောက်ျားကလည်းရုံး
တစ်ရုံးမှာ ညဂျူတီကျတာကြောင့်အိမ်မှာ အဆိုပါစာရေးမလေးရယ် ၊စာရေးမလေးရဲ့
နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးရယ်သာရှိကြတာပါ။ အဲဒီမနက်စောစော ၁နာရီလောက်မှာပဲ
ကံဆိုးစွာ ၀ရမ်းပြေးတစ်ယောက်ဒီမြို့မှာ ပုန်းခိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ရုတ်တ
ရက် ရှောင်တခင်အနေနဲ့ရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့ ရဲတွေပူးပေါင်းပြီး
သံ ဆူဆူညံညံကြောင့်လန့်နိုးသွားပြီး မိမိအိမ်မဟုတ်မှန်းသိတော့ ခဏလောက်ကြောင်
ပြီးထိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စာရေးမလေးထွက်လာပြီး သူများတစ်မျိုးမြင်မှာစိုးတာ
လို့အလန့်တကြားအပြောကြောင့် ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ပဲ အခန်းတွင်းကိုပြေးဝင်ပုန်းနေ
လိုက်ပါတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တွေလည်း အိမ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေလဲ ဘာလဲမေး
တော့ စာရေးမလေးကဘယ်သူမှမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ မိမိတို့သားအမိနှစ်ယောက်သာရှိ
ကြောင်းပြောနေစဉ် အဖွဲ့ထဲမှာပါလာတဲ့ရဲတစ်ယောက်က အိမ်အပြင်ခန်းမှာခေါင်းအုံး
တွေစောင်တွေတွေ့ကြောင်းပြောပြီး အခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာမှာတော့ ပုန်းနေ
တဲ့ကိုဖိုးအေးကိုတွေ့ကြပါတော့တယ်။ ကိုဖိုးအေးတို့ဘယ်လိုပဲ ရှင်းပြပေမဲ့အားလုံးရဲ့အ
မြင်ကတော့ ကိုဖိုးအေးသူတစ်ပါးမိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ အမဲစက်ကြီးစွန်းထင်း
သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖိုးအေးမိန်းမကလည်း အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သူကိုဖိုးအေး
နဲ့ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာပြီး လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ကျော်
မှုအနေနဲ့ မယားခိုးမှုအနေနဲ့တရားစွဲဆိုမခံရလေအောင် ကိုဖိုးအေးစုဆောင်းထားတဲ့ငွေ
တွေပုံအောသုံးလိုက်ရတာကြောင့် လက်လွတ်ခွက်ချွတ်ဖြစ်ပြီး လက်ဗလာနဲ့ကိုဖိုးအေး
ဟာ ကံကတော့ဆိုးပြီးရင်းဆက်တိုက်ဆိုးနေခဲ့ရှာပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့အ
ဖြစ်အပျက်ကို မမီမီကအရင်ဦးအောင်ကိုဖိုးအေးရဲ့ရုံးမှာ သွားရောက်တိုင်ကြားလိုက်တာ
ပါပဲ။ အရင်ကတည်းက နေရာကောင်းကောင်းရထားပြီး ရိုးသားအေးဆေးတဲ့ကိုဖိုးအေး
ဟာ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုခံရတာကြောင့်ရာထူးတူသူအချင်းချင်း
ကမနာလိုကြတာ တွေရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုအကြောင်းတွေကြားတော့ အဲဒီလူတွေက
အဆင်းမှာဘီးတပ်ပြီး တော်တော်ဖွကြလို့ရုံးမှာလည်း ကြာကူလီ ဆိုပြီးမျက်နှာမပြရဲ
ချိန်မှာ အထက်လူကြီးကလည်းခေါ်ပြီး မေးမြန်ချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲရှင်းပြရှင်းပြ အထောက်
အထားနဲ့မြင်တာကိုပဲယုံနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး စာရိတ္ထကိုထိန်းရန်၊ နောင်ဒီကိစ္စဖြစ်
ရင် အလုပ်ထုတ် ပစ်မည့်အကြောင်း ခေါ်ယူကြိမ်းမောင်းပြစ်တင်တာကြောင့် ရုံးကနေ
ထွက် ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလည်းပြိုကွဲပြီး၊ အလုပ်အကိုင်လည်းမဲ့သွားတဲ့ ကိုဖိုးအေးဟာ
ချင်တော့တာကြောင့် အခြားမြို့တစ်မြို့ကိုပြောင်းကာ ဘ၀ကိုဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ကြမ်း
တမ်းတဲ့အလုပ်တွေမျိုးစုံလုပ်ကာ ကိုဖိုးအေးဘ၀မှ ယခုဦးဖိုးအေးဘ၀နဲ့ အသက်၅၀
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀နဲ့ နေနေပါသေးတယ်။
ဦးဖိုးအေးပြောပြောနေတာကတော့ “ငါဘယ်တုန်းကမှ သူများမယားကိုဒီဘ၀မှာ စိတ်ကူးနဲ့တောင် မပစ်မှားခဲ့ဖူးပါဘူး ”တဲ့။
ဒီအကြောင်းလေးကတော့ ကျွန်မအမေပြောပြောပြတဲ့ ဘသာဘ၀က၀င်စားလာတဲ့
ဦးဖိုးအေးအကြောင်းပါ။ အမေအဓိက ကျွန်မတို့ကိုပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့
အတိတ်ဘ၀ကမကောင်းမှုဟာ ဒီဘ၀မှာကံကောင်းလို့ လူဖြစ်လာစေဦးတော့
အမေကတော့ ယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းနေပါတယ်… အရင်ဘ၀က၀ဋ်ကြွေးတွေကို
ကဲ……..အားလုံးပဲဝဋ်ကြွေးတွေကိုနောက်ဘ၀ကို သယ်မသွားပဲ ၀ဋ်ကြွေးတွေကင်းကြပါ
may flowers has written 61 post in this blog.
View all posts by may flowers →	Blog
ကိုရင်မောင် says: သံဝေဂ ရစရာ ဘ၀အကြောင်းလေးပါ..
မောင်ပေ says: မေလေးရာ
ဖတ်ပြီး ကဖိုးအေးကို သနားမိလို့
may flowers says: အားပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ကိုရင်မောင်ရေ။
အရေးကောင်းတယ်ပြောလို့ ၀မ်းသာပြီး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ကိုပေရှင့်။
the best says: တစ်ပိုင်းစီဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ရိုက်ရင် ပေါက်မယ်။
ster says: အရေးအသားကြောင်. ထင်တယ်၊ ဖတ်လို.ကောင်းပါတယ် ma may flowers ရေ။ နောက်ထပ် နောက်ထပ်တွေ မျှော်နေပါ.မယ်။
Zune Phyu says: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်..နောက်စာတွေလဲမျှော်နေပါ့မယ်
may flowers says: the best ရေ ကျွန်မလည်းစဉ်းစားနေပါတယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လေ ..ခုလောလောဆယ်တော့ ပိုစ့်တွေရေး
ster ရေ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ပြောလို့ကျေးဇူးနော။ Zune Phyu နောက်ပိုစ့်တွေလည်း အများကြီးရေးဦးမှာမို့ အားပေးပါဦးနော်။
thar ag says: ဇာတ်လမ်းလေးကတော်တော် ကောင်းပါတယ် အစအဆုံးဖတ်ရှု အားပေးသွာပါတယ် နောက်ထပ်လဲဆက်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ် စါရေးသူအားအစဉ်အားပေးလျှက်ပါ
ရွာစားကျော် says: သူများမယားကိုဒီဘ၀မှာ စိတ်ကူးနဲ့တောင် မပစ်မှားခဲ့ဖူးပါဘူးတဲ့ ဦးဖိုးအေးကြီး အရင်ဘ၀က၀ဋ်ကြွေးတွေကို ဒီဘ၀နဲ့ အကျေဆပ်နိုင်ပါစေဗျာ…
may flowers says: thar ag ရေအစဉ်အားပေးနေကြောင်းပြောပြလို့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ်နော်။
ကို ရွာစားကျော်ရေ မေဖလားဝါးလဲ အဲလိုဆုတောင်းနေပါတယ် ။ ပြည့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1254
Shwe Ei says: ၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပ တဲ့ မှန်လိုက်တာ။ အတိတ်ဘ၀က မကောင်းတာလုပ်ခဲ့သမျှ သိခွင့်ရပီး ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုလေ့ကျင့်ထားလို့ရရင်ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 481
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အော်….
ကိုဖိုးအေး ဘဝ ရိုးဖြောင့်ပါရက်နဲ့……
lazy boy says: အရင်ဘ၀က၀ဋ်ကြွေး ကုန်ရင်သူ့ ဘ၀လေးသာယာမှာပါ
သာယာပါစေလို့ဆုတောင်ပေးပါတယ်
may flowers says: ဟုတ်ပါရဲ့ Shwe Ei ရယ် အမလည်းအတိတ်ဘ၀ကို သိခွင့်ရချင်သား…….။
မိုက်လေး ဆုတောင်းပြည့်ပါစေလို့ အမကလည်းဆုတောင်းပါတယ်ကွယ်။
lazy boy ရဲ့ ဆုတောင်းလေးပြည့်မှာပါကွယ်။
San Hla Gyi says: အင်း မ may flowers ရေ
ဝင်ဖတ်သွားပါကြောင်း။ အတိတ်ဘဝကို သိခွင့်မရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကောင်းတာတွေဆိုရင် စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ် တဘဝတည်းနဲ့ ကြေဖို့ခက်ပါတယ်။ နောက်တော့လည်း ချဲ့ပြောကြတာပေါ့။ တော်ကြာ ကျနော်ပြောလိုက်လို့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ဖြစ်လာအုံးမယ်။
သရဲအကြောင်း ရေးတာတွေ့လို့ ကြုံတုန်းပြောရအုံးမယ်။ ပရိတ်တော်တွေထဲမှာ အာဋာနာဋိယသုတ်ဟာ သရဲတစ္ဆေတွေကို နှင်ထုတ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး သံပုံးတွေ ဘာတွေတီးပြီးတော့လည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို နှင်ထုတ်နိုင်တယ်။ သိပ်မကြမ်းတမ်းတဲ့ ကောင်တွေဆိုရင် ကန့်ရယ် အင်တွဲရယ် ဆနွင်းရယ်ကို ဆတူရောပြီး မကြာခဏ မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပေးရင်လည်း တော်တော်တန်တန်ဆိုရင် ပြေးတာပဲတဲ့။
San Hla Gyi says: အော်မေ့လို့ နောက်ဆုံးနည်းကတော့ လောကီပညာကျွမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦး ပြောဖူးတာဖြစ်ကြောင်း။
snow white says: မေဖလားဝါးရေစနိုးကတော့ဇာတ်သိမ်းလေးဘဲဖတ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖတ်လိုလည်းကောင်းပါတယ် မကောင်းမှုဟူသည်မျက်ကွယ်မပြုပါဘူး မကောင်းမှုလုပ်သောသူ ကိုယ်ဘာသာသာပြန်ခံကျရမည်သာဖြစ်သည်။
mocho says: မိုချိုက အပိုင်းလိုက် ဇါတ်လမ်းရှည်တွေ ဆို အားလုံးပြီးမှ အေးအေးဆေးဆေး အစ အဆုံး ဖတ်တတ်တာမို့ ပေါင်းပြီး မန့် လိုက် မယ် နော်။ စာဖတ်သူကို မပျင်းအောင် ဆွဲ ခေါ်သွားနိုင်တဲ့ စာရေးလက် ရှိတဲ့ စာရး ဆရာမ လေး ပဲ လို့ မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။
၀ဋ် ဆိုတာ မျိုးက သာမန် ပုထုဇဉ် မပြောနဲ့ တို့ ဘုရားရှင်တောင် ရှောင်လွှဲ လို့ မရပါဘူး။ နောက်တမျိုးပြောရရင် ဒီဘ၀ မှာကောင်းတာတွေပဲ လုပ်နေပါရဲ့ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ရင် လွှဲချ စရာ၊ ဖြေသိမ့် စကားလုံး တလုံး ရတာပေါ့။
may flowers says: mocho ရေ အားပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်။
လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအမြင်ချင်းတော့ ဘယ်တူနိုင်မလဲ ကိုSan Hla Gyi ရယ်။ ဘာပဲ ပြောပြောဝေဖန်
ထောက်ပြ ပြီးညွှန်ပြပေးတဲ့အတွက်ကော ကျွန်မအတွက်ဗဟုသုတအဖြစ်မသိသေးတဲ့အရာတွေကို
ပြန်ပြောပြပေးတဲ့ အတွက်ကော အားပေးဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
snow white ကိုရော ကျေးဇူးနော်။
mamanoyar says: ဖတ်လို့တကယ်ကောင်းပါတယ်ရှင်
Comments By Postမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - KZ - ဘဲဥကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ဘဲဥ - KZလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - KZ - ဦးဦးပါလေရာအတ္တဆန် - Khaing Zar Win - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦးဦးပါလေရာ - Foreign Residentမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Phoe Thitsar - Myo Thantမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - N@ng Ghi Ghi Joe Zကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46အဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - ဦးဦးပါလေရာပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Myo Thantမင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ခရီးသည်ကြီး - TNAယုံလား? - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်သူ - ရွှေ ကြည် - Mobile13ရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - MaMa - N@ng Ghi Ghi Joe ZCongress - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - parlayar 46East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77766 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67182 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58170 Kyats )MaMa (57638 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်